NY MAILAKY NY RAMBLER DIA TSY MIASA: NY ANTONY FOTOTRA SY NY VAHAOLANA - RAMBLER MAIL - 2019
Tena Rambler Mail
Famahana olana amin'ny asa Rambler Mail
Ny mailaky ny Rambler - na dia tsy ny serivisy mailaka malaza indrindra aza, fa azo antoka. Maro ny mpampiasa misafidy manana mailaka eto. Saingy indraindray, manandrana mamoaka indray ny mailaka indray izy ireo dia mety misy olana sasany.
Rambler tsy manokatra mailaka: olana sy vahaolana
Soa ihany fa tsy misy ny olana tsy azo odian-tsy hita. Amin'ity tranga ity dia misy antony marobe.
Antony 1: Fampidirana diso na tenimiafina diso
Io no iray amin'ireo antony mahazatra indrindra misakana ny mpampiasa tsy hiditra ao anaty mailaka.
Misy vahaolana maromaro eto:
Mila manamarina raha efa miverina ny CapsLock. Amin'ity tranga ity dia esory tsotra izao ny fanalahidy ary avereno ny data indray.
Included Russian layout. Ny fidirana amin'ny data dia azo atao amin'ny teny latinina ihany. Hikirakira ny fanovana klavier "CTRL + Shift" (na "Alt + Shift") ary miezaha miditra indray ny anaran'ny mpampiasa sy ny tenimiafina.
Raha toa ka tsy manampy ireo fomba ireo dia andramo ny famerenana ny tenimiafina. Ho an'ity:
Ao amin'ny varavarankala fidirana dia ahitantsika ny rohy "Adinoy ny tenimiafinao?" ary tsindrio eo.
Ao amin'ny varavarankely vaovao, midira ny adiresy mailaka fidirana anao, midira ny captcha (lahatsoratra amin'ny sary) ary tsindrio "Next".
Lazao ny nomeraon-telefaona (1), izay voalaza nandritra ny fisoratana anarana ary tsindrio "Raiso ny code" (2).
Misy fehezan-teny fanamafisana dia alefa amin'ny nomeraon-telefaona amin'ny SMS. Ampidiro eo amin'ny saha misy azy io.
Vao mainka aza ny mamorona tenimiafina vaovao (3), manamarina izany amin'ny fidirana indray (4) ary tsindrio "Save" (5).
Antony 2: Olana amin'ny browser
Ny serivisy momba ny famandrihana Rambler dia tena mafonja momba ny tranokala navela hitsidika azy. Noho izany, mety tsy hanomboka raha toa ka misy dikan-teny maoderina na vetivety ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny aterineto, raha toa ka ampiasaina ny fomba fifanarahana ary / na raha toa ka sarotra ny cache sy ny cookies. Andao isika handamina.
Raha ny tena marina, ilaina ny famerenana amin'ny fotoana fohy fa tsy ny mpitety tranonkala, fa ny programa rehetra ampiasaina amin'ny ordinatera, ary koa ny rafitra miasa. Ity no loham-pandrafetana fototra amin'ny fikirakirana tsy misy fepetra, ary ny fampiasana haingana ny rindrambaiko sy ny ampahany rehetra amin'ny OS. Efa nanoratra momba ny fametrahana fanavaozana ho an'ireo browsers malaza indrindra amin'ny tranonkala izahay. Araho fotsiny ny rohy etsy ambany, jereo ny fandaharam-potoanao ary vakio ny torolalana amin'ny antsipiriany mba hanavaozana azy.
Vakio bebe kokoa: Ahoana ny fanavaozana ny tranonkalanao
Raha nametraka ny fanavaozana ho an'ny navigateur ianao dia andramo ny fitsidihana ny tranokalan'ny Rambler Mail, tokony hajanona ny olana amin'ny asany. Raha tsy mitranga izany, dia manatòna ny dingana manaraka.
Hamafa Cookies sy Cache
Cookies (cookies) - rakitra iray izay ahitan'ny tranonkala tranokala vaovao avy amin'ny serivisy sy ny fampahalalana amin'ny mpampiasa. Ity farany dia ahitana ny logins sy ny tenimiafina, ny tarehimarika voatondro, ny antontan'isa ary ny maro hafa. Rehefa mitsidika loharano iray ianao, dia alefan'ny mpampiasa io rakitra io, izay ahafahanao mamantatra ilay mpampiasa, ary maika haingana kokoa ny doka Download. Na eo aza ny maha-zava-dehibe sy ny tombotsoan'ny cookies, indraindray ity rakitra ity dia tompon'andraikitra amin'ny andraikitry ny tranonkala sasany. Anisan'ireo maromaro noforonina sy mavitrika, mba hahazoana antoka ny asany, ity rakitra ity dia tokony hofafana.
Vakio bebe kokoa: Fanadiovana cookies amin'ny tranonkala malaza
Rehefa avy namaky ilay lahatsoratra tao amin'ny rohy etsy ambony ianao ary manao ny dingana voalaza ao amin'ny tapany farany dia mandehana any amin'ny tranokalan'ny Rambler Mail. Raha mbola tsy miasa izany dia mila manazava ny cache ihany koa isika, izay horesahantsika etsy ambany.
Fanamarihana: Cookies dia voatahiry mandritra ny fivoriana iray monja, izany hoe mandra-pikirakirana ny tranonkala, ka azonao atao ny manombina indray ny programa mba hamafa haingana ity rakitra ity.
Cache - rakitra tsy maharitra, izay manatsotra sy mampihena ny Internet amin'ny aterineto amin'ny voalohany, saingy amin'ny fampitomboana ny volany, dia mifanohitra amin'izay, dia afaka mampihena ny asan'ny navigateur web izany, ankoatra ny fametrahana enta-mavesatra amin'ny sarety sarotra sy ny rafitra manontolo. Ireo angon-drakitra ireo, toy ireo cookies voalaza etsy ambony, dia tokony ho voafafa tsindraindray. Azonao atao ny mijery ny fomba hanaovana izany ao amin'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny tranokalantsika.
Vakio bebe kokoa: Manaova cache amin'ny alàlan'ny tranonkala malaza
Tahaka ny amin'ny fanatanterahana ireo dingana etsy ambony ireo, aorian'ny fanesorana ny cache, dia manandrama ny FIFANANA ao amin'ny navigateur anao - ny serivisy dia tokony hiasa. Raha tsy mitranga ity fotoana ity dia mandehana.
Hanafoana ny fahazoan-dàlana fifanarahana
Ny endriky ny fifanarahana dia tena ilaina amin'ny maro, fa tsy ny tranga rehetra. Noho izany, raha alefa amin'ny tranokala izay ampiasaina hitsidihana ny tranokalan'ny Rambler Mail, dia mety handà ny hanomboka ny serivisy mailaka. Indraindray ao amin'ny pejy dia misy filazana mifandraika amin'ny famaritana ilay olana ary manolotra ny vahaolana, saingy tsy izany foana no izy.
Raha te hanavotra ny tenanao ny fifanarahana dia araho ny dingana etsy ambany. Ao amin'ny ohatra asehonay, Google Chrome dia ampiasaina, fa ny fampianarana omena dia mihatra amin'ny mpizara Internet rehetra.
Ao amin'ny sehatr'asa, tadiavo ny fivilian-tserasera (tokony hanakatona ny programa mialoha) ianao, tsindrio eo ankavanana (PKM) ary sokafy ny singa "Properties".
Ao amin'ny varavarankely misokatra, mandehana any amin'ny tablette "Fifampifanarahana mifamadika" ary tsindrio ny boaty "Fandaharam-pamokarana amin'ny fomba fanao fifanarahana".
Avy eo, tsindrio ny bokotra etsy ambany. "Ampiharo" ary "OK" mba hampiakatra ny varavarankely.
Rehefa nesorina ny fomba fifanarahana, dia asao ny navigateur ary alefaso any amin'ny tranokalan'ny Rambler ao. Raha nahazo tombony ny serivisy - dia tsara, fa raha tsy izany, dia tsy maintsy misy hetsika henjana kokoa.
Jereo koa: Manaova fametavetana fanodinana amin'ny Internet Explorer
Manamboara ny navigateur
Raha toa ka tsy nisy ny fomba ambaran'ity lahatsoratra ity izay nanampy tamin'ny famahana ny olana tamin'ny asan'ny Rambler, ary mbola tsy afaka miditra amin'ny serivisy amin'ny alalan'ny navigateur, dia mila manavao azy ianao. Saingy tokony atao tsara izany - aloha, tokony hanaisotra tanteraka ny dikan-teny taloha sy ny angon-drakiny ianao, manadio ny rafitra amin'ny soritsary sy ny antontan-taratasin-tselatra, ary aorian'io dia hametraka ny dikan-teny farany amin'ny programa amin'ny alàlan'ny famoahana azy amin'ny tranonkala ofisialy.
Raha te hanala tanteraka ny navigateur web ianao dia ampiasao ny iray amin'ireo lahatsoratra etsy ambany. Rehefa tapitra ity dingana ity, ny programan'ny CCleaner sy ny torolalana an-tsipirihany amin'ny fampiasana azy dia hanampy amin'ny fanesorana ny rafitra.
Fandaharan'asa hanesorana programa
Fomba hanesorana programa mampiasa Revo Unistaller
Manadio ny ordinatera amin'ny fako mampiasa ny programan'ny CCleaner
Ahoana ny fanavaozana ny tranokala Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandeks.Browser
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny famerenana tanteraka ny tranokala web dia ahafahanao manaisotra ireo olana rehetra mitranga amin'ny asany. Anisan'ireo, ary ny fidirana amin'ny tranonkala sasany, indrindra fa ny momba an'i Rambler Mail sy ny ilk. Raha toa ka tsy manao ny serivisy mailaka ity dia ampiasao ny soso-kevitra etsy ambany.
Optional: Ad blockers
Vao haingana, nangatahana i Rambler Mail fa ny fanakanana dokam-barotra dia hajanona ao amin'ny pejiny, izay asehon'ny fampahafantarana mifandraika amin'izany eo amin'ny zoro havia ankavia amin'ny varavarankelin'ny serivisy mailaka. Izany hoe, na inona na inona fanitarana azonao ampiasaina amin'ity tanjona ity ao amin'ny navigateur, ianao dia mila manafoana izany. Ny fisorohana ny fahatsapana ankapobeny, dia manamarika izahay fa ny dokam-barotra amin'ity tranonkala ity dia tsy miseho, fa tsy hisy hanelingelina ny asan'ny singa sy ny asany rehetra.
Fanamarihana: Ny fanampim-bokan'ny tranokala ho an'ny fanakanana adiresy dia tsy manelingelina mivantana amin'ny fidirana amin'ny tranokalan'ny Rambler Mail, izay tsy azo lazaina momba ny ankamaroan'ny antony hafa nodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Raha tsy afaka miditra amin'ny tolotr'asa ianao, dia jereo ireto vahaolana manaraka ireto, ary mariho fotsiny ireo toromarika etsy ambany.
Jereo koa: Inona no tsara kokoa - AdGuard na AdBlock
Ny fampitahana, anisan'izany AdBlock, AdBlock Plus, AdGuard, uBlock Origin ary ny hafa, aza avela hanompo tsara ny serivisy. Anisan'ny vokatra matetika amin'ny fampiasana azy ireo dia tokony hanasongadina ireo olana amin'ny fanokafana na fandefasana taratasy, ny tsy fahafahana mandefa sy / na mandroso ary maro hafa. Amin'io fotoana io ihany koa ireo pejy misy sokajy taratasy (miditra, mivoaka, manodina, sns.) Dia mety hitovy amin'ny mahazatra ary ny navigation ihany dia mety miasa eo anelanelan'izy ireo.
Raha te hamafa ny fanakanana adiresy amin'ny navigateur rehetra ianao, mila havaozina havia eo amin'ny soritra misy azy eo ankavanan'ny adiresy.
Miankina amin'ireto adiresy fanakanana dokam-barotra ireto dia ampiasao ny iray amin'ireto:
AdBlock - mifidiana ny singa ao amin'ny lisitra fidirana "Hanafoana ity tranonkala ity";
AdGuard - Midira eo amin'ny toeran'ny tsy miasa (havia) mifampitantana amin'ilay singa "Filalaovana eo amin'ity tranokala ity";
uBlock Origin - Tsindrio ny bokotra manga eo amin'ny bokotra manga toy ny on / off switch ka tsy mavitrika intsony izy;
Raha mampiasa fitaovana fanampiny ianao hanakanana dokam-barotra, araho ny dingana voalaza etsy ambony.
Amboary ny pejy Mail Mail raha tsy mitranga izany (CTRL + F5 amin'ny klavier).
Rehefa vita ireo dingana tsotra ireo, dia afaka mankafy ny fiasan'ny serivisy tsy misy fampandrenesana sy ny zavatra takiana. Raha, na izany aza, ireo toro-hevitra voarakitra ato amin'ity lahatsoratra ity dia tsy nanampy anao hamaha ny olana amin'ny asan'ny Rambler Mail, mandehana amin'ny vahaolana manaraka.
Antony 3: Fametraham-panontaniana momba ny fiarovana
Amin'ity tranga ity, mila mahazo antoka ianao fa ny fotoana napetraka amin'ny famantaranandro PC dia marina. Ho an'ity:
Ao amin'ny fikandrana mikaroka famantaranandro.
Sokafy ny motera fikarohana (ohatra Google), manoratra ao, ohatra, "Fotoana any Kazan" ary jereo ny valiny amin'ny famantaranandro PC.
Raha toa ka misy ny tsy fitovizan-tsonia, tsindrio ny bokotra ankavanana ary mifidiana "Fametrahana ny daty sy ny ora".
Ao amin'ny fikandrana fikandrana misokatra, tadiavo ilay singa "Hanova daty sy fotoana" ary tsindrio "Change".
Ao amin'ny fikandrana popup, atsangano ny fotoana mety ary tsindrio "Change".
Tsy manelingelina ny fanavaozana ny rafitra miasa mankany amin'ny dikan-dingana farany. Ny fomba hanaovana izany dia voafaritra amin'ny antsipiriany eto:
Ahoana ny fampivoarana Windows 10
Ahoana ny fampivoarana Windows 8
Antony 4: Lock lock
Raha tsy mampiasa ny E-mail ianao mandra-pahatongan'ny fotoana, dia azo zakaina aloha ny mandefa taratasy ary avy eo alefany. Amin'ity tranga ity, mila mamoha ny kaonty ianao. Izany dia atao toy izao:
Fanamarihana: Ny dingana voalaza eto ambany dia tsy maintsy tanterahina amin'ny solosaina.
Ny pejy famandrihana amin'ny "Mail Mail"
Araho ny rohy etsy ambony mankany amin'ny tranonkala serivisy manokana. Ampidiro ny anarana sy ny tenimiafin'ny kaontinao ary tsindrio avy eo "Login".
Soraty eo amin'ny pejy manaraka ny famantarana sy ny tenimiafin'ny mailakao eo amin'ny sehatra mifanaraka amin'izany, ary tsindrio ny boaty "Hamaha".
Tsindrio ilay bokotra "Login" noho ny fanomezan-dàlana amin'ny tolotra Rambler.
Raha toa ka voamarina ny olana amin'ny asan'ny Rambler Mail noho ny fanakanana azy noho ny "tsy firaharahiana" lava dia hanampy azy ireo hanafoana azy ireny.
Antony 5: Famafana mailaka
Rehefa esorina ny kaonty misy an'i Rambler, antsoina hoe "Profil profil", dia alefa ihany koa ny mailaka ao amin'ny serivisy mailaka. Miaraka amin'ny e-mail, ny tranonkala rehetra dia alaina amin'ny endritsoratra sy fanontana. Ny famahana ilay olona nanafoana ny kaonty - ny mpampiasa azy na ny mpitsikera - dia tsy misy dikany, satria rehefa vita io fomba io, dia tsy azo ovaina intsony ny boaty ao amin'ny Rambler na ny angona voatahiry ao aminy. Ny vahaolana tokana azo atao, na dia azo antsoina tahaka izany aza, dia ny famoronana tantara vaovao momba an'i Rambler.
Vakio bebe kokoa: Fanoratana mailaka amin'ny Rambler
Antony 6: tsy fahombiazan'ny asa fanompoana
Mampalahelo fa vao haingana dia ny tsy fahombiazan'ny fandriam-pahalemana indrindra indrindra ny olana momba ny asan'ny Rambler Mail. Mandritra izany fotoana izany, indrisy fa ho an'ireo mpampiasa, ny solontenan'ny serivisy dia tsy mitatitra velively izany, ary tsy mitatitra momba ny fanafoanana ny olana. Manjary tsy misy ilana azy izany ary mikasa ny hifandray amin'ny fanohanana ara-teknika Rambler - ny valiny dia tonga andro vitsy taty aoriana, ary na dia maro aza taty aoriana. Ny litera ihany no milaza ny toe-javatra: "Eny, tsy nahomby izany, nesorina ny zava-drehetra."
Na izany aza, na dia eo aza ny tsy fahavitan'ny solontenan'ny serivisy haneho hevitra momba ny asany amin'ny fotoana mahamety azy, dia hamela rohy mankany amin'ny valin'ny feedback. Eto amin'ity pejy ity dia azonao atao ny manontany ny fanontanianao, anisan'izany ny fahadisoana azo atao, ny tsy fahombiazan'ny fotoana, ny antony sy ny fe-potoana.
Rambler Mail Technical Support Page
Azonao atao ny mamantatra raha ianao ihany na ireo mpampiasa hafa dia manana olana amin'ny mail nalefan'ny Rambler, amin'ny loharanom-baovao manokana. Ireo tolotra toy izany dia manara-maso ny asan'ny tranokala sy ny fampiasana ny mpampiasa azy, mampiseho ny fotoana tsy fahombiazan'ny "crashes", ny fihenan'ny mpanatrika. Ny iray amin'ireo fitaovana fanaraha-maso ireo dia ny DownDetector, ny rohy izay ambara eto. Mamakia azy, mamantatra ny Rambler eo ary manamarina ny zava-bitany amin'ny fandaharam-potoana.
Mandehana any amin'ny DownDetector amin'ny aterineto
Araka ny hitanao dia misy antony vitsivitsy mahatonga ny Rambler Mail tsy miasa. Ny sasany amin'izy ireo dia azo alaina mora foana, ho an'ny hafa, dia mila manandrana kely ianao ary miezaka ezaka, saingy misy ihany koa olana izay tsy ahafahan'ny mpampiasa tsy afaka miatrika fotsiny. Manantena izahay fa ilaina io fitaovana io ary manampy amin'ny famerenana ny fahombiazan'ny serivisy.
https://termotools.com mg.termotools.com © Rambler Mail 2019